Semiconductor ပစ္စည်း ကုမ္ပဏီ Hwatsing Technology သည် Star Market IPO ကို ပြီးစီး ခဲ့သည် - Pandaily
Semiconductor ပစ္စည်း ကုမ္ပဏီ Hwatsing Technology သည် Star Market IPO ကို ပြီးစီး ခဲ့သည်
Jun 08, 2022, 16:09ညနေ 2022/06/08 23:30:38 Pandaily
Tianjin Semiconductor ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်သူHuasheng Technology Co., Ltd. သည် ရှန်ဟိုင်း နည်းပညာ ဆန်းသစ်တီထွင် မှု ဘုတ်အဖွဲ့ (Star Market) တွင် စာရင်းဝင် သည်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ။ ကုမၸဏီက ရွယ္ယာ တစ္စု လွ်င္ ယြမ္ ၁၃၆ ဒသမ ၆၆ (ေဒၚလာ ၂၀ ဒသမ ၄၇) ျဖင့္ ရွယ္ယာ ၂၆ ဒသမ ၆ ၆၇ သန္း ထုတ္ ေပးခဲ့ၿပီး စုစုေပါင္း ရန္ပံုေငြ ယြမ္ ၃ ဒသမ ၆၆ ဘီလ်ံ (ေဒၚလာ ၅ ၄၉ သန္း) ရရွိခဲ့သည္။
Hwatsing Technology သည် IPO အတွက် ယွမ် ၁ ဘီလီယံ မြှင့်တင် ရန်စီစဉ် ထားပြီး ၎င်းတို့အနက် ယွမ် သန်း ၃၅၀ သည် အဆင့်မြင့် semiconductor ပစ္စည်း စက်မှုလုပ်ငန်း စီမံကိန်းများ (ဓာတု စက်ယန္တရား ပိုလန် စက် များ) ၊ အဆင့်မြင့် semiconductor ပစ္စည်း သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း များအတွက် ယွမ်သန်း ၂၀၀ ၊ wafer recovery စီမံကိန်း များအတွက် ယွမ်သန်း ၁၅၀ နှင့် ငွေ ဖြစ် လွယ် မှုအတွက် ယွမ်သန်း ၃၀၀ ဖြစ်သည်။ တနည်း အားဖြင့် Huaxun Technology သည် မူလ စီစဉ် ထားသည် ထက် ယွမ် ၂. ၆ ဘီလီယံ ပိုမို ရရှိခဲ့သည်။
Hwatsing Technology သည် ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ April ပြီ လတွင် တည်ထောင်ခဲ့ပြီး အဓိက လွတ်လပ်သော ဉာဏ ပစ္စည်း မူပိုင်ခွင့် များ ရှိသော အဆင့်မြင့် semiconductor ပစ္စည်း ထုတ်လုပ် သူဖြစ်သည်။ ၎င်း၏အဓိက ထုတ်ကုန် များမှာ ဓာတု စက် မှုဆိုင်ရာ ပိုလန် (CMP) ပစ္စည်းကိရိယာ များဖြစ်သည်။ CMP သည် အဆင့်မြင့် ပေါင်းစည်းထားသော ဆားကစ် ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် အဆင့်မြင့် ထုပ်ပိုး ခြင်းအတွက် လိုအပ်သော အဓိက လုပ်ငန်းစဉ် နည်းပညာဖြစ်သည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:Display panel ထုတ်လုပ်သူ HKC သည် IPO မတိုင်မီ A-share စာရင်း အတွက်ပြင်ဆင် ခြင်း ပြီးဆုံး သည်
၎င်း၏ CMP ပစ္စည်း ကိရိယာများကို SMIC ၊ Yangtze Storage Technology, Huahong Group, Intel နှင့်အခြား ထိပ်တန်း တရုတ်နှင့် နိုင်ငံခြား ချစ်ပ် ထုတ်လုပ် သူများ၏ ၁၂ လက်မ နှင့် ၈ လက်မ ပေါင်းစပ်ထားသော circuit ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း များတွင် ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်။
အဓိက ပစ္စည်းကိရိယာများ ပတ် ၀ န်းကျင်တွင် Hwatsing Technology သည် နည်းပညာဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုများကို wafer regeneration ၊ အဓိက အစိတ်အပိုင်းများ ကိုပုံမှန် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်း ခြင်း၊။ “ပစ္စည်းကိရိယာ + ၀ န်ဆောင်မှု” နှစ် ဘီး ယက် ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ပုံစံကို တဖြည်းဖြည်း ပုံဖော် ခဲ့သည်။
ကုမ္ပဏီ၏ အလားအလာ များအရ ၂၀၁၉ ၊ ၂၀၂၀ နှင့် ၂၀၂၁ တွင် ၀ င်ငွေသည် ယွမ်သန်း ၂၁၀ ၊ ၃၈ ၆ သန်းနှင့် ယွမ်သန်း ၈၀၀ အသီးသီးရှိသည်။ အလားတူ ကာလအတွင်း ၎င်း၏ အသားတင် အမြတ် သည်ယွမ် ၁၅၄ သန်း၊ ယွမ် ၉၇. ၇၉ သန်းနှင့် ယွမ် ၁၉၈ သန်း အသီးသီးရှိသည်။ နှုတ် ယူ ပြီးနောက် အသားတင် အမြတ် သည်-47 ဖြစ်သည်။ ယွမ် ၇. ၂ ၃၃ ဘီလီယံ၊ ယွမ် ၁၄. ၆ ၁၄၆ သန်းနှင့် ယွမ် ၁၁၄ သန်း အသီးသီးရှိသည်။
GTA Semiconductor သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက်တွင် စက်မှုနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ် ရေးအတွက် နိုင်ငံတော် အုပ်ချုပ် ရေးတွင် မှတ်ပုံတင်ခြင်း အပြောင်းအလဲ ကို ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ဖြည့်စွက် ခဲ့သည်Xiaomiနှင့်အခြား ကုမ္ပဏီ များကို ရှယ်ယာရှင် များအဖြစ် ။